Atọ Atọ nke Mgbakwunye Ahịa na Otu esi egbochi ha | Martech Zone
Atọ Atọ nke Mgbakwunye Mgbakwunye na Otu esi zere ha
Monday, April 24, 2017 Tuesday, April 25, 2017 Robert Glazer
Mgbakwunye ụlọ ọrụ nwere nsogbu. Enwere ọtụtụ egwuregwu, akwa, na akụkụ na-akpụ akpụ. Ọ bụ ezie na ụfọdụ nuances ndị a bụ ihe na-eme ka ụdị njikọta pụrụ iche ma baa uru, dị ka ijikọ ụgwọ na nsonaazụ, enwere ndị ọzọ na-anaghị achọsi ike. Ihe ọzọ bụ na, ọ bụrụ na ụlọ ọrụ amaghị banyere ha, ha nwere ike ibibi ụdị ha.
Maka ụlọ ọrụ iji ohere ahụ zuru oke wee laghachi na ntinye ego nke mmemme mgbakwunye nwere ike ịmịpụta, ọ dị ha mkpa ịghọta ma mata akụkụ ụfọdụ na nuances nke ụlọ ọrụ ahụ. Lee ihe atọ ị ga-elezi anya:
Mmekọrịta Na-ekeghị Uru
Mgbakwunye bụ ndị mmekọ ahịa. Ha gụnyere ndị na-ede blọgụ ọdịnaya, saịtị nyocha, ụlọ akwụkwọ, na nzukọ dị iche iche, ịkpọ aha ole na ole, ma nwee ike ịba uru na ịkwalite ngwaahịa na ọrụ ngwaahịa. Ọnụ ọgụgụ ka ukwuu bụ ndị a ma ama na-agbasikwa ahịa ahịa ziri ezi maka ụdị. Otú ọ dị, e nwekwara ndị na-adịghị.
Na Mgbakwunye ahia, echiche nke "ịba ụba" na-ezo aka na ahịa nke onye mgbasa ozi na-agaghị enweta na-enweghị onyinye mgbakwunye. Yabụ, ndị mmekọ na-ebugharị ndị ahịa ọhụụ na ụlọ ọrụ.
Ebe ọ na-enweta nuanced bụ mgbe ụlọ ọrụ chere na ndị mmekọ niile na mmemme ha na-ebu ire ahịa ndị ahịa ọhụụ mgbe, n'eziokwu, enwere ndị na-erite uru na mbọ nke ndị mmekọ ma ọ bụ ọwa ndị ọzọ.
Dị ka ihe atụ, ụfọdụ Mgbakwunye (anyị ga-akpọ ha “ikpeazụ-na mmekọ”) chepụta ha azụmahịa ụdị na-agbalị na weghara ahịa ndị na-ama na-azụ usoro ma ọ bụ na ịzụ ahịa ụgbọ. Site n'ime nke a, ha nwekwara ike imetụta ndị mmekọ ndị na-ebugharị uru maka ọnụahịa maka ndị ahịa na ndị ahịa ọhụrụ site na blọọgụ ha, ọwa mgbasa ozi mmekọrịta, saịtị nyocha, wdg.
Site na igbochi onye ahịa mgbe ebumnuche ha zụrụrịrịrịrịrịrịrịrịrị na nke dị elu ma ọ bụ nke ziri ezi tupu ha ere, ndị mmekọ ikpeazụ a na-enwetakarị otuto maka azụmahịa ha mere ntakịrị iji bido ma ọ bụ nyeghị uru mgbakwunye. N'ihi ya, ụlọ ọrụ na-akwụ ụgwọ ndị ikpeazụ a na ndị mmekọ ndị nwere nnukwu ọrụ.
Iji gbochie ụdị ọrụ a na-enweghị uru na mmemme gị, ọ dị mkpa ịnabata nsonaazụ na ihu-uru. Gwuo n'ime usoro ndị mmekọ gị iji ghọta n'ezie otu ha si akwalite akara gị ma tụlee ịhazi ụdị njirimara mpụga gị ka ọ ghara ịkwụghachi omume a.
Mmekọ na-adịghị mma
Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị mmekọ bụ ndị mmekọ ụkpụrụ omume na-eme ka ụlọ ọrụ dị mkpa dị mkpa, apụl ọjọọ dị adị, ọ dị nwute. Ndị ahịa ahịa a na-enweghị isi ekwesịghị inwe mgbagwoju anya na ndị mmekọ nwere ike ghara ịgbakwunye uru mgbakwunye. Mba, ụdị ndị mmekọ a dị njọ karịa. Ha na-etinye aka na ahịa aghụghọ na-anakọta ọrụ.
Dịka ọmụmaatụ, na nso nso a isiokwu, Dr. Mehmet Oz kesara akụkọ nke ya banyere otu ụfọdụ ndị mmekọ na-enyo enyo na ndị na-ere ahịa n'ịntanetị jiri ụdị ya iji ree ma kwalite acai berry na ngwaahịa ndị ọzọ - niile na-enweghị ikike ya. Ọ meela nke ọma na ọ na-etinye akara ya na iguzosi ike n'ezi ya n'ihe ize ndụ. Iji dọrọ uche gaa n'okwu a nke juru ebe niile, Dr. Oz nyefere onwe ya otutu ngosipụta nke ihe onyonyo ya gosiputara n’isiokwu a, obụna na-ego ndị nyocha nzuzo n’onwe ha ịchọpụta ndị ndị a na-ere ahịa dị nro ma kụziere ọha na eze otu esi adaba ha.
Fọdụ ụlọ ọrụ maara maka apụl ndị a jọgburu onwe ha mana ha gbanyepụrụ ha ihu n'ihi na usoro ahịa ha na-eweta ego. Ndị ụlọ ọrụ ndị ọzọ amaghị na ụdị ndị a dị na mmemme ha ma ọ bụ na-akwalite akara ha n'ụzọ na-akwadoghị ma ọ bụ n'ụzọ adịghị mma. Agbanyeghị, ọ nweghị ndapụta na-egosi nke ọma na ụlọ ọrụ ma ọ bụ na-egosi mmemme na-aga nke ọma.
Yiri otu ị ga - esi zere ịkwụ ụgwọ ndị mmekọ na - enyeghị uru ọ bụla, igbochi ndị mmekọ na - adịghị mma ịbanye na mmemme gị chọrọ ka ị kpachara anya nke ọ bụla n'ime ndị mmekọ gị, nwee nghọta nghọta banyere ihe ha na - eme iji kwalite ma gosipụta akara gị na nyochaa omume ha ozugbo a nabatara ha na mmemme gị.
Maka ihe ka ọtụtụ n'akụkọ ihe mere eme nke ụlọ ọrụ mgbakwunye, netwọkụ na-anọchite anya ndị mmekọ na ndị ahịa n'otu azụmahịa ma na-ana "ụgwọ arụmọrụ" ime nke a. Ọ bụ ezie na ihe owuwu a abụghị nke jọgburu onwe ya ma ọ bụ nke megidere iwu, ọ naghị ahapụ ohere maka nlele na itule ziri ezi, yabụ na-akwado onyinye mgbe niile. Ebumnuche ndị a na-ezighi ezi ebutewokwa n'okwu ndị siri ike, gụnyere aghụghọ, ịgha ụghalaahịa, na nri kuki.
Taa, ọ bụ ezie na ụlọ ọrụ ahụ amalitela ma tozuo okè, ụfọdụ n'ime ihe ndị ahụ na-ezighị ezi na-akwado ha ka dị n'ihi na ha na-erite ọtụtụ n'ime ndị egwuregwu ahụ uru; imechi omume ndị a nwere ike ịpụta obere uru. N'ụzọ dị mma, enwere ụlọ ọrụ ndị na-achọpụtawanye ndị ha na ha na-emekọrịta ihe. Ha na-amalite ịkatọ ndị mmekọ na-enweghị azụ ha, ndị na-anaghị anọchite anya akara ha na iguzosi ike n'ezi ihe, na ndị na-anabata kickbacks. Nke a bụ nnabata nnabata na nke ga - enyere ụdị mgbakwunye aka iru ebe onye ọ bụla nwere ohere ịme ọfụma ma rụọ ọrụ ọnụ na - arụpụta ihe.
Nuances dị na ụlọ ọrụ ọ bụla. Fọdụ na-ebute uru asọmpi ebe ndị ọzọ nwere ike ịbụ ihe mmebi nke ụdị mmadụ. Site na ịhọrọ ndị mmekọ gị nke ọma, na-achọ nghọta site n'aka ha, na ijide n'aka na enwere njikọ doro anya n'etiti nsonaazụ ị na-enweta na ego ị na-akwụ, ị ga-enwe ike ịgụta ụgwọ ọrụ mmemme mmemme na-enye .
Tags: MgbakwunyeMgbakwunye marketingnri kukidọkịta ozDr. oz. ozigwu wayoMehmet Ozshawn hoganshoemoneyụghalaahia akaraunethical Mgbakwunye
Robert Glazer bụ onye nchoputa na onye isi nchịkwa nke Mmekọrịta osooso, onye nchoputa, na Onye isi oche nke BrandCycle na onye edemede nke Mmekọrịta Mmekọrịta: Oge Checkered gara aga, nginggbanwe Agbanwe Ọdịnihu na Ọdịnihu na-atọ ụtọ nke Mgbakwunye Ahịa. Ọ bụ onye na-azụ ahịa n'usoro nwere oke egwu na oke egwu maka mmụba ego na uru maka ụlọ ọrụ ndị B2C, na-emekọrịta ihe dịka Adidas, ModCloth, Reebok, Target, Tiny Prints, Gymboree, na Warby Parker.